EXO အဖွဲ့ကို ဘယ်လောက်မုန်းမုန်း ဒီလိုတော့မလုပ်သင့်ဘူးထင်ပါတယ်…😧 – Trend.com.mm
EXO အဖွဲ့ကို ဘယ်လောက်မုန်းမုန်း ဒီလိုတော့မလုပ်သင့်ဘူးထင်ပါတယ်…😧
Posted on August 14, 2018 August 14, 2018 by Noel
EXO-L တွေကတော့ အတော်လေးကိုဒေါသဖြစ်နေကြပါပြီ။သိပ်မကြာသေးခင်က EXO အဖွဲ့ဟာ Macau ဒေသမှာ ဖျော်ဖြေပွဲကျင်းပခဲ့တယ်လို့သိရပြီး အဲ့ဒီဖျော်ဖြေပွဲမှာ Anti-exo တစ်ယောက်ရဲ့ မကျေနပ်စွာတိုက်ခိုက်မှုကိုခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။
ဖျော်ဖြေနေစဉ်အချိန်အတွင်းမှာ EXO အဖွဲ့ဝင်တွေကို တစ်ယောက်ယောက်က လေဆာမီးနဲ့ထိုးခဲ့တာကို ပွဲလာကြည့်တဲ့ EXO-L တွေက သတိထားမိခဲ့ပါတယ်။စတိတ်ပေါ်မှာဖျော်ဖြေနေစဉ်အတွင်း Anti-exo တစ်ယောက်က EXO အဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Sehun ရဲ့မျက်နှာတည့်တည့်ကိုလေဆာမီးနဲ့အဆက်မပြတ်ထိုးနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Someone is pointing lasers to the members’ eyes, now it’s Sehun she’s targetting. Where’s the security?! Drag her out of the venue alr. She’s so annoying. Why is she even here.
elyxion isaconcert for exo and exo ls ONLY. stop with the childish acts
— 🌸 (@kjininihae) August 10, 2018
ပြီးတော့ကျန်တဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ မျက်နှာ၊မျက်လုံးအနီးကို လိုက်ပြီးချိန်ဆထိုးနေခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီလိုလေဆာမီးနဲ့မျက်လုံးကိုထိုးနေတာဟာ အန္တရာယ်လည်းများသလို ရိုင်းစိုင်းတဲ့အပြုအမူတစ်ခုပါပဲ။မျက်လုံးထဲကိုလေဆာမီးရောင်ဝင်ရင်မျက်လုံးဒဏ်ရာဖြစ်သွားနိုင်သလို လေဆာမီးပြင်းရင်ပြင်းသလောက် အမြင်အာရုံကိုဆိုးဆိုးဝါးဝါးထိခိုက်သွားစေနိုင်ပါတယ်။လူတစ်ယောက်ကိုဘယ်လောက်မုန်းမုန်း၊မကြိုက်ဘူးဆိုဆို ဒီလိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေလောက်တဲ့အပြုအမူလုပ်တာမျိုးတော့ မဖြစ်သင့်ဘူးထင်ပါတယ်။
EXO အဖွဲ့ဝင်တွေဟာလည်း မျက်လုံးကိုလေဆာနဲ့ထိုးခံရတဲ့အချိန်မှာ ဖျော်ဖြေနေဆဲဖြစ်လို့ ဘာမှမလုပ်နိုင်ပဲ မျက်လုံးကိုလက်နဲ့သာပွတ်ခဲ့ရတာကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်။ကံကောင်းစွာနဲ့ အဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံး ထိခိုက်မှုပြင်းထန်တာမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။EXO-L တစ်ယောက်ကတော့ “လေဆာမီးနဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ မျက်လုံးကိုထိုးနေတာ လုံခြုံရေးတွေက ဘယ်နေရာတွေရောက်နေပါလဲ?လေဆာမီးထိုးနေတဲ့သူကိုရှာပြီး ဖျော်ဖြေပွဲထဲကဆွဲထုတ်ပစ်ရမှာကို။ဒါက EXO တွေရဲ့ ဖျော်ဖြေပွဲဖြစ်လို့ EXO-L တွေအတွက်ပါပဲ။ဘာလို့ Anti-exo က ဒီဖျော်ဖြေပွဲကိုရောက်နေရတာလဲ၊ကလေးဆန်တဲ့အပြုအမူတွေကိုရပ်သင့်ပြီ”ဆိုပြီးဒေါသတကြီးရေးသားထားခဲ့ပါတယ်။
တစ်ချို့ကလည်း “EXO ကိုမကြိုက်ရင် ဘာလို့ဒီဖျော်ဖြေပွဲအတွက်လက်မှတ်ဝယ်နေရသေးတာလဲ။သူတို့ကိုမကြိုက်ဘူးဆိုလာမကြည့်နဲ့ပေါ့။အချိန်ပေးပြီးပိုက်ဆံကုန်ခံပြီးတောင် လေဆာမီးနဲ့လိုက်ပြီးအန္တရာယ်ပေးနေတာကို တကယ်နားမလည်နိုင်ဘူး”ဆိုပြီးကောမန့်တွေရေးသားထားပါတယ်။
EXO-L တှကေတော့ အတျောလေးကိုဒေါသဖွဈနကွေပါပွီ။သိပျမကွာသေးခငျက EXO အဖှဲ့ဟာ Macau ဒသေမှာ ဖြျောဖွပှေဲကငျြးပခဲ့တယျလို့သိရပွီး အဲ့ဒီဖြျောဖွပှေဲမှာ Anti-exo တဈယောကျရဲ့ မကနြေပျစှာတိုကျခိုကျမှုကိုခံခဲ့ရတယျလို့သိရပါတယျ။
ဖြျောဖွနေစေဉျအခြိနျအတှငျးမှာ EXO အဖှဲ့ဝငျတှကေို တဈယောကျယောကျက လဆောမီးနဲ့ထိုးခဲ့တာကို ပှဲလာကွညျ့တဲ့ EXO-L တှကေ သတိထားမိခဲ့ပါတယျ။စတိတျပျေါမှာဖြျောဖွနေစေဉျအတှငျး Anti-exo တဈယောကျက EXO အဖှဲ့ဝငျတဈယောကျဖွဈတဲ့ Sehun ရဲ့မကျြနှာတညျ့တညျ့ကိုလဆောမီးနဲ့အဆကျမပွတျထိုးနခေဲ့တာဖွဈပါတယျ။
ပွီးတော့ကနျြတဲ့အဖှဲ့ဝငျတှရေဲ့ မကျြနှာ၊မကျြလုံးအနီးကို လိုကျပွီးခြိနျဆထိုးနခေဲ့တာဖွဈတယျလို့သိရပါတယျ။ဒီလိုလဆောမီးနဲ့မကျြလုံးကိုထိုးနတောဟာ အန်တရာယျလညျးမြားသလို ရိုငျးစိုငျးတဲ့အပွုအမူတဈခုပါပဲ။မကျြလုံးထဲကိုလဆောမီးရောငျဝငျရငျမကျြလုံးဒဏျရာဖွဈသှားနိုငျသလို လဆောမီးပွငျးရငျပွငျးသလောကျ အမွငျအာရုံကိုဆိုးဆိုးဝါးဝါးထိခိုကျသှားစနေိုငျပါတယျ။လူတဈယောကျကိုဘယျလောကျမုနျးမုနျး၊မကွိုကျဘူးဆိုဆို ဒီလိုအန်တရာယျဖွဈစလေောကျတဲ့အပွုအမူလုပျတာမြိုးတော့ မဖွဈသငျ့ဘူးထငျပါတယျ။
EXO အဖှဲ့ဝငျတှဟောလညျး မကျြလုံးကိုလဆောနဲ့ထိုးခံရတဲ့အခြိနျမှာ ဖြျောဖွနေဆေဲဖွဈလို့ ဘာမှမလုပျနိုငျပဲ မကျြလုံးကိုလကျနဲ့သာပှတျခဲ့ရတာကိုမွငျတှရေ့ပါတယျ။ကံကောငျးစှာနဲ့ အဖှဲ့ဝငျတှအေားလုံး ထိခိုကျမှုပွငျးထနျတာမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယျ။EXO-L တဈယောကျကတော့ “လဆောမီးနဲ့အဖှဲ့ဝငျတှရေဲ့ မကျြလုံးကိုထိုးနတော လုံခွုံရေးတှကေ ဘယျနရောတှရေောကျနပေါလဲ?လဆောမီးထိုးနတေဲ့သူကိုရှာပွီး ဖြျောဖွပှေဲထဲကဆှဲထုတျပဈရမှာကို။ဒါက EXO တှရေဲ့ ဖြျောဖွပှေဲဖွဈလို့ EXO-L တှအေတှကျပါပဲ။ဘာလို့ Anti-exo က ဒီဖြျောဖွပှေဲကိုရောကျနရေတာလဲ၊ကလေးဆနျတဲ့အပွုအမူတှကေိုရပျသငျ့ပွီ”ဆိုပွီးဒေါသတကွီးရေးသားထားခဲ့ပါတယျ။
တဈခြို့ကလညျး “EXO ကိုမကွိုကျရငျ ဘာလို့ဒီဖြျောဖွပှေဲအတှကျလကျမှတျဝယျနရေသေးတာလဲ။သူတို့ကိုမကွိုကျဘူးဆိုလာမကွညျ့နဲ့ပေါ့။အခြိနျပေးပွီးပိုကျဆံကုနျခံပွီးတောငျ လဆောမီးနဲ့လိုကျပွီးအန်တရာယျပေးနတောကို တကယျနားမလညျနိုငျဘူး”ဆိုပွီးကောမနျ့တှရေေးသားထားပါတယျ။
Jennie လေးကတော့ Running Man အစီစဉ်ကနေ ပရိတ်သတ်တွေရဲ့အချစ်တွေကို သိမ်းပိုက်သွားပြန်လေပြီ